बुद्ध एयरले साताको दुई पटक काठमाडौँ-वनारस उडान भर्ने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बुद्ध एयरले साताको दुई पटक काठमाडौँ-वनारस उडान भर्ने
डिसी नेपाल , १३ जेठ २०७५
काठमाडौँ। नेपालको अग्रणी विमानसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले भारतको एतिहासिक तथा धार्मिक नगरी वनारसमा आउँदो असार १५ गतदेखि साताको दुई पटक उडान भर्ने भएको छ। आइतबार हिमालय होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्।
सम्मेलनमा बोल्दै निर्देशक बस्नेतले दुई पौराणीक नगरी काठमाण्डौ र वनारसलाई नेपालको बुद्ध एयरले मात्रै हवाई उडानबाट जोडेको बताए। यस अघि बुद्ध एयरले वनारसमा महिनामा दुई पटक उडान भर्दै आएको थियो।
बुद्ध एयरले उडानसँगै नेपाली तथा भारतीय यात्रु/तिर्थालुहरुलाई भारी छुटमा पर्यटकीय तथा धार्मिक यात्रा प्याकेज पनि उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। निर्देशक बस्नेतले नेपालगञ्ज तथा भारतको नयाँदिल्ली उडानबारे पनि संक्षिप्त चर्चा समेत गरेका थिए। यसका लागि कम्पनीले यही साताभित्रै मन्त्रालय तथा विभागहरुमा निवेदन बुझाउने छ।
यस्तै बुद्ध एयर रिसर्च तथा डेभलपमेण्ट विभागकी आस्था बस्नेतले नयाँ बन्न लागेको वेबपोर्टल युजर फ्रेण्डली हुने र यसबाट केही क्लिकमै नेपालका पर्यटकीय तथा तिर्थस्थलहरुबारे सजिलै जानकारी पाउने बताइन्। वेवपोर्टलमा नेपालका रमणीय स्थलहरुसम्बन्धी मल्टिमिडिया तथा फोटो फिचरहरु हुने उनले जानकारी दिइन्।
आरएण्डीकी एक्जुकेटिभ अफिसर बस्नेतले बुध्द एयरको होलिडे प्याकेजहरुबाट बुद्ध एयरलाई मात्र नभई सबै सरोकारवालाहरुलाई उत्तिकै फाईदा हुने प्रष्ट पारिन्। प्याकेजबाट होटल, ट्रान्सर्पोटेसन, टुर गाईड लगायत अन्य सबैलाई फाईदा हुनेछ। बुध्द एयरले केही साता अगाडी मात्रै 'पशुपतिनाथ दर्शन' र 'विविध वाराणसी' यात्राबारे भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेको थियो।
भारतीय तथा विदेशी पर्यटकका लागि टेम्पल रन, टेल अफ टु भ्यालिज, टेम्पलस एण्ड टाईगर्स तथा मनकामना, जानकी, मुक्तिनाथ दर्शन तथा अन्य प्याकेजहरु पनि छन्। यसैगरि नेपाली यात्रुहरुको लागि वाराणसी, सारनाथ, गया, बोधगया, इहालावाद, प्रयाग, अयोध्यालक्षित प्याकेजहरु पनि रहेको उनले बताइन्।